PHOTO:Jonathan Burton UMandla Ncikazi obengumsizi kaSteve Komphela kuMaritzburg United uthi uzosebenza kanzima ukugcina umsebenzi omuhle kaKomphela emva kokuba emenyezelwe ngoLwesine olwedlule njengomqeqeshi omusha waleli qembu.
“Ithuba lokuqeqesha iqembu engilinikwe usihlalo weqembu uFarouk Kadodia angikalikholwa futhi ngiyabonga kakhulu. Phela selokhu ngaqala ukuqeqesha kuyaqala ukwenzeka lokhu empilweni yami. Phela iningi lamaqembu engisebenze kuwona bengiba umsizi womqeqeshi (assistant). So ja kuzoba yinselelo enkulu,” kusho uNcikazi obengumsisi kaKomphela kuleli qembu.
“Singajabula ukumbona eqhubeka nomsebenzi omuhle owaqalwa uSteve Komphela. Ngesizini edlule sikwazile ukubambelela nokuqeda kwitop 8 nesingakuthanda ukukubona kwenzeka futhi.